ADS Myanmar Blog – #No.1 Free Classified website in Myanmar
Continue reading “ကုန်ပစ္စည်းအလျင်အမြန် ရောင်းထွက်နိုင်စေမည့် Ads ရဲ့ VIP ဝန်ဆောင်မှုအသစ်”
Author JasminePosted on April 7, 2017 April 7, 2017 Categories Ads, News and Press, OtherLeaveacomment on ကုန်ပစ္စည်းအလျင်အမြန် ရောင်းထွက်နိုင်စေမည့် Ads ရဲ့ VIP ဝန်ဆောင်မှုအသစ်
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဖို့ တီထွင်ဖန်းတီးမှုတွေ အားစိုက်မှုတွေကသိပ်ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ
သာမာန်လူတစ်ယောက် ကြည့်တဲ့အကြည့်ထက် ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ကကြည့်တဲ့အကြည့်က ပိုထူးခြားတယ် ထိုသူသည် ရုပ်ဆိုးသော်လည်းကောင်း ရုပ်ဆိုးနေပေလိမ့်မည် သို့သော် ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်၏အမြင်တွင်မူ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မမြင်နိုင်တဲ့ထိုသူ၏အလှတရားတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနေမှာအမှန်ပင်
လေ့လာချက်များအရ လူတစ်ယောက်ဟာ သူဖန်တီးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုတွေကွဲပြားသွားတတ်ကြပါတယ်ပန်းချီဆွဲတတ်တဲ့သူဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုပဲကြည့်မကောင်းနေပါစေ သူ၏အနုပညာကို သူ့ကိုလှပအောင်တန်ဆာစဉ်နေသလိုပဲ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဟာလည်း သူ့အနုပညာအပေါ်အားစိုက်ထုတ်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိနေလေရဲ့
မိမိချစ်ရတဲ့သူတစ်ဦးဦးက ဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင် ဈေးတန်ပြီးကင်မရာမော်ဒယ်စုံရှိတဲ့ ဒီလင့်ခ် http://bit.ly/2z6pLoW လေးထဲမှာ ကင်မရာအမိုက်စားလေးတွေဝယ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်
သူတို့ဟာ ဘယ်အရာမှာမဆို ထိုအရာရဲ့ဆွဲဆောင်မှု၊ လှပမှုတို့ကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်
angle အတွက်အားစိုက်ရှာဖွေကြတယ် angle ရပြီဆိုရင် ligting တွေတွက်ဆက်စဉ်းစားနေပြီ
ဒါက လက်ထဲမှာကင်မရာမပါတာတောင်မှ မျက်လုံးနဲ့စိတ်ကူးထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေပါပဲ
ဒါပေမယ့် သူတို့အနုပညာတိုးတက်အောင် တီထွင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အနုပညာရှင်တိုင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အမြဲတူညီကြပါတယ် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှု၊ နေထိုင်မှုတွေကိုဖော်ကြူးဖို့ဆိုရင်တော့
သဘာဝကို သိသာစွာခံစားနိုင်မယ့် ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံကဖော်ကြူးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် အဲ့လိုအရာတွေကို ဓာတ်ပုံထဲမှာသေချာစွာပါဝင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဓာတ်ပုံဆရာတွေက နေရာပေါင်းစုံ ဘက်ပေါင်းစုံကိုနေ တီထွင်ကြံဆပြီး ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထွက်လာဖို့အားစိုက်ကြရပါတယ်
(၃) အမှီအခိုကင်းပြီး လွတ်လပ်တယ်
ဓာတ်ပုံဆရာအများစုဟာ တစ်သီးပုဂ္ဂလ (freenlancer) နေထိုင်သူတွေများပါတယ်
အသစ်အသစ်တွေတွက် နေရာဒေသမျိုးစုံကိုသွားပြီး လေ့လားစူးစမ်းမယ်..အနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုဖန်တီးမယ်…ဒါဟာသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ
ဓာတ်ပုံဆရာလုပ်ဖို့ သဘောမတူတဲ့ မိဘ၊ ဆွေမျိုး၊ ချစ်သူ ဒါတွေကိုသူစွန့်လွှတ်ပြီး
သေချာတာကတော့ သူဝါသနာပါရာ သူ့အနုပညာကိုမြတ်နိုးနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်
Author NwayHtetPosted on October 8, 2017 October 7, 2017 Categories Lifestyle, OtherLeaveacomment on Photographer တွေမှာရှိတဲ့ဆွဲဆောင်မှု
Ads ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ ပိုနေတာတွေပြန်ရောင်းပြီး ငွေဆောင်မှာအပန်းဖြေကြမယ် 😍 😍
အိမ်မှာပစ္စည်းတွေပိုနေလို့ စိတ်ရှုပ်နေလား အကောင်းတိုင်းရှိသေးပြီး မသုံးဖြစ်လို့ပိုနေလား?
ads.com.mm မှာမည်သည့်ကော်မရှင်ခမှပေးစရာမလိုဘဲ အခမဲ့ကြော်ငြာတင်ပြီး ငွေဆောင်ကိုအပန်းဖြေခရီးသွားခွင့်ကံထူးမယ့်အခွင့်ရေးရမှာနော်
(၁) ads app ကို ဒီလင့်ခ် http://bit.ly/2eSwcmG လေးထဲမှာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
(၂) ၄င်း app မှတစ်ဆင့် အိမ်မှာပိုနေလို့ ပြန်ရောင်းချင်တာတွေကို အခမဲ့ကြော်ငြာတင်လိုက်ပါ ( စက်တင်ဘာလ ၃ဝရက်နေ့ထိပဲနော်)
(၃)ကြော်ငြာတင်ထားတဲ့သူများထဲမှ ကံထူးသူကို အောက်တိုဘာလမှာ မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာပါ။
ကံထူးရှင်က မိမိနှင့်အတူသွားချင်တဲ့သူတစ်ဦးကို ခေါ်လာခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပြီး ငွေဆောင်သွားခွင့် အသွားအပြန်ကားလက်မှတ်နှင့် ငွေဆောင်ရှိဟိုတယ်တွင် ၁ညတာအနားယူအပန်းဖြေခွင့်ရရှိမှာပါ
ဒီတော့ ချစ်ရတဲ့သူနှင့် ငွေဆောင်လည်လည်သွားဖို့ ခုပဲအိမ်မှာရှိသမျှပစ္စည်းတွေကို ads.com.mm မှာ အခမဲ့ကြော်ငြာတင်ရောင်းလိုက်တော့နော် 😉 😀
Author NwayHtetPosted on September 14, 2017 Categories Ads.com.mm, News and Press, OtherLeaveacomment on ပိုနေတာတွေရောင်းပြီး ငွေဆောင်မှာအပန်းဖြေကြမယ်
ဝိုး………ads နှင့်အတူ စိမ်းလဲ့တင် အပန်းဖြေစခန်းကို သွားဖို့အခွင့်အရေးကြီး
သူငယ်ချင်းနှင့်အတူ တစ်ရက်ခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ စိမ်းလဲ့တင် အပန်းဖြေစခန်းကို အတူသွားဖို့ ads မှာဂိမ်းကစားလိုက်ရအောင်!
ဆော့ရမယ့်ဂိမ်းလေးကတော့ ads ပရိသတ်ကြီးတို့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ ကြော်ငြာရှာရမယ့်ဂိမ်းလေးပါပဲ။ ads.com.mm ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ ads logoနှင့်အတူ စိမ်းလဲ့တင်နာမည်ပါတဲ့ ပုံလေးကို ကြော်ငြာအနေနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်။ အဲ့ကြော်ငြာကို လိုက်လံရှာဖွေရမှာဖြစ်ပြီး တွေ့ရှိသူများထဲမှ (၅) ဦးကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာပါ။
မဲပေါက်တဲ့သူက အတူသွားချင်တဲ့သူတစ်ဦးကိုခေါ်လာခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပြီး စိမ်းလဲ့တင်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ activities (၇)မျိုးထဲကမှ တစ်ယောက်ကို တစ်ခု ကစားခွင့်ရမှာဆိုတော့ အရမ်းမိုက်သွားပြီနော်
1. Paint Ball
2. Skate boarding ,
3. Rock climbing,
4. Rope course,
5. Zip lining,
6. Shooting range,
7. Death Drop (free fall) တို့ဖြစ်ပါတယ်
(၁) – ဒီပို့စ်ကို အတူသွားချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို tag ၍ public share ပြီး comment တွင် Done ဟု မန့်ပါ။
(၂)- ads logoနှင့်အတူ စိမ်းလဲ့တင်နာမည်ပါတဲ့ ပုံလေးကို Ads.com.mm ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာလိုက်လံရှာဖွေပါ။
(၃) -ပုံရှာတွေ့ပါက screenshot ရိုက်ပြီး ads.com.mm ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာ ရဲ့ message box ကိုလာပို့ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
(message box တစ်ခုတည်းကိုသာပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်)
စည်းကမ်းချက်နဲ့ကိုက်ညီသော ကံထူးရှင်များကို မဲနှိုက် ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လ (၂၉)ရက်နေ့မှာ ကြော်ငြာပေးသွားမှာပါ
winners (၅)ဦးမဲဖေါက်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ကံထူးရှင်တစ်ဦးစီတိုင်းက အတူသွားချင်တဲ့သူတစ်ဦးကိုခေါ်လာခွင့်ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် စိမ်းလဲ့တင်သွားခွင့် + ကစားနည်းတစ်ခု ကံစမ်းနိုင်ဖို့ ခုပဲဂိမ်းကစားလိုက်ကြရအောင်! 😉 😉
ဖွက်ထားတဲ့ပုံကိုရှာဖွေရန် >> http://bit.ly/2uTSY4W
Author NwayHtetPosted on August 1, 2017 Categories OtherLeaveacomment on ads နှင့်အတူ စိမ်းလဲ့တင် အပန်းဖြေစခန်းကို သွားဖို့အခွင့်အရေးကြီး